Yini Amarekhodi Wokukhiqiza?
Amarekhodi okukhiqizwa asetshenziswa njengengxenye yokugcina irekhodi ekulimeni ukusiza ekuphathweni kwepulazi. Ukuphathwa kwepulazi kuhlanganisa ukuhlela izitshalo nokuzalana kwezilwane, ukulandelela izitshalo / ukufuywa kwemfuyo kanye nokukwazi ukuhlela ukukhiqizwa ngokusekelwe emarekhodi okukhiqiza yonyaka odlule. Ukugcinwa kwamarekhodi kanye namarekhodi okukhiqiza ekulimeni unikeza isisekelo lapho umlimi esebenza khona.
Amarekhodi okukhiqiza ayasiza ukuthola izinkinga zokukhiqiza ukuze ukusebenza kwepulazi kungenziwa ngcono. Amarekhodi avamile kakhulu okukhiqizwa asetshenziswayo amarekhodi okulima kwezitshalo, ukukhiqizwa kwemfuyo, amarekhodi omsebenzi kanye nemishini.
Izinhlobo Zamarekhodi Wokukhiqiza
Amarekhodi okukhiqiza angaba ngesifredishithi esilula esibonisa, isibonelo, inyanga, uhlobo lwezitshalo, ukutshala nosuku lokuvuna, uhlobo lwezinkomo, isivuno, imakethe ethengiswayo nokuthengisa intengo ngekg. Amarekhodi okukhiqiza angase abe nzima nakakhulu futhi afake imininingwane eminingi. Izibonelo ezimbalwa zibalwe ngezansi.
Le dokhumenti ingafaka zonke izinsimu ezihlukahlukene noma izinombolo zezithelo zezithelo, ubungako bokukhiqiza, ukukhiqiza okukhona kanye nokuhlaziywa kwenhlabathi komhlaba okusetshenziselwa leso sitshalo noma izithelo ezithile.
Ezinye izinto ezifakwe kumarekhodi okulima kwezitshalo zifaka umquba, ukuhlwanyela imbewu, izindlela zokulima, ukhula nokulawulwa kwezinambuzane, isikhathi sokusebenza kanye nezitshalo.
Amarekhodi okukhiqiza izimfuyo
Yonke imininingwane ephathelene nokulima kwemfuyo kufanele ifakwe lapha. Izibonelo zondla, imithi yokwelapha, izindleko zokuthengisa kanye namarekhodi ezilwane ngamanye ukukhiqizwa, amarekhodi e-calving, ukukhiqizwa koboya, ukugcoba okuningi nokuzuza kwesisindo.
Izinombolo zemfuyo zokuvulwa nokuvala kufanele ziqoqwe ngokuhambisana nobudala kanye nobulili, isibonelo, izinkomo, izinkomo kanye nezinkomo ezimbili ezineminyaka emibili ubudala.
Izindaba zomsebenzi ezinjengezinkontileka zesevisi zabasebenzi, izinkokhelo ezitholiwe, izindleko, izindleko zezokwelapha kanye isinxephezelo sesisebenzi sibhalwe kumarekhodi abasebenzi. Ezinye izinto okufanele zibe kufakwe phakathi kwenani labasebenzi, izikweletu, izikweleti, ukushiya nokungabikho.
Imininingwane yamathuluzi ifakwe kumarekhodi wemishini futhi kufanele ifake imininingwane efana nalokhu uhlobo lomodeli, iminyaka, ukubaluleka kwencwadi, ukulungiswa, amarekhodi ensizakalo, amahora asetshenzisiwe kanye nomshuwalense.